» Somali Star Award oo lagu qabtay Magaalada Delft ee Wadanka Netherland+Vidoe
DHAGAYSO: Faah Faahin kasoo baxaysa Wafdiga Gaaray Kismaayo ‘Maxey la kulmeen”
Fariin ku wajahan aabe iyo hooyo walbo (ubadkaaga adigay kugu dayanayaan )
SAWIRO: 18-ka May Maalin Qashinga laga nadiifiyo deegaanada SSC
Faah Faahin: Wafdigii IGAD oo gaaray Kismaayo kulana la leh Axmed Madoobe
Xildhibaano Cusub oo maanta ku biiray barlamaanka Soomaaliya “Akhri Magacyada”
Somali Star Award oo lagu qabtay Magaalada Delft ee Wadanka Netherland+Vidoe
January 13, 2013 - Written by ahmednews - Edited byahmednews ShareMunasabad balaraan oo lagu magacdaray Somalia Star Award ayaa waxaay ka dhacaday Magaalada delft ee Wadanka Holland.
Musanabadan oo ujeedkeedu ahaa in lagu abaal mariyo Shaqsiyaadka Haldoorka u ah Bulashada ku nool Magaalada Delft iyo Guud ahaan Wadanka Netherland.
Munasabada ayaa waxaa soo abaabulay Ururka Midnimo ee ay ku mideysan yihiin Jaaliyada Somaliyeed ee Magalada Delft waxaana Fikirkaan Qabashada Munasabadan Curiyay Aqonyahanada wax ku bartay Wadanka Holland ee kala ah Cabdikariin Maxamuud Sh iyo Xusein iyo Khaalid oo ah Xildhibaanka kaliyah ee Somalida wadanka holland ugu jira Dowladaha Hoose ee Wadanka Holland.
Inta ay socotay Munaasabadaas ayaa waxaa Bilado la gudonsiyay Arday Aqonyahano iyo Xubno u dhaq dhaqaaqa Bulashada
waxaana xubanahaasi kamid ahaa
Maxam,ed yusuf Askari
iyo Sahro Sh .ismaciil
Dhanka Aqonyahanada wadanka wax ku bartay
Du,caale Cali Yusuf
Dhanka waxqabadka Bulashada
Sh.Ismacil Dahir Barre
Cabdiladiif Axmed Maxamuud
Axmed Yusuf Liwaardan
Munasabada Somalia Star Award ayaa waxaay dhiri galin iyo Farxad u noqotay caruur badan oo wax ka barata Magaalada Delft ee Wadanka Holland kuwas oo hada ka dib dadaal dheeri ah u gali doona sidi ay u hanan lahayeen biladi ay hanteen sanadkan qaar ka mid ah caruurta ku dadaashay Waxbarashada.
Munasabadan oo ahayd midi ugu horeysay ee noceda oo kale lagu qabto wadanka Holland ayaa waxaa si weyn u soo dhaweyay qaybaha kala duwan ee bulashada somalida ah ee ku nool wadanka holland.
Inta ay munasabadan socotay waxaa ka hadlay Masuliyiin ka tirsan Dowlada hoose ee Magaalada Delft oo ay ka mid yihiin Axmed Yusuf Warsame iyo Xildhibaan Khalif Xasan.
Waxaa sido kale hadalo qimo badan ka soo jeediyay Gudomiyaha Ururka Midnimo Ibrahim waxaan uu shacabka Somaliyeed ugu baqay in ay noqda 0.1 oo uu uga jeeday in Somalida ay midowdo oo ay noqoto hal far.
Sido kale waxaa Ereyo wacdi iyo waano iskugu jiray ka jeediyay Furitaanki Musabadan Dr Cumar Weheliye waxana uu ku dheeraday qimaha ay leedahay in lagu dhaganado Diinta iyo dhaqanka qaas ahaan in la adkeeyo barashada luqada Somaliga oo ay caruur badan oo wadanka holland ku dhashay ilobeen.
Waxaa sido kale Musanasabada ka hadlay Oday Maxamed Lugod oo ka mid ah Golaha Barlamanka Midnimo Delft Maxamed waxaa uu si weyn uga hadlay waxqabad u Aqonyahan Cali Yaxye uu ka wada Gobolada Somalia waxaana uu shegay in Yaxye Foundetion oo ah Hay,ad wax barta Agonta Somaliyeed inta ay jirtay in ay qabatay wax la taaban karo hadana ay mudantahay in guud ahan Jaliyada Somaliyeed ee Holland ay garab istagaan Yaxye Foundetion.
Ugu danbeyn waxaa madasha ka hadlay Aqonyahan Cali Yaxye oo asagu la gudonsiyay bilada shaqsiga ugu dadaalka badan Somalida Holland waxaana uu shegay in usan ku soo talagalin in la gudon sin doono abal marin intaas le,eg sidaas daraaded usan qudbad dheer jeedin doonin balse uu shacabka reer Delft ugu baqayo in ay ilashadan Midnimadooda.
Sayid Cali Maxamed Cali